Umhla My Pet » 5 Izinto ukuba Wingwoman ukuba Khumbula
Kuba wingwoman kukho umsebenzi obalulekileyo! Kufuneka uqinisekise ukuba ukwakha ukuzithemba kwaye ukuchola iinyama zonke Yiya enye. Kodwa loo nto umhlobo kwaye ngethemba babeza kwenza okufanayo ukuba kwaye xa neembadada kwelinye unyawo. Ndiye wabeka kunye tips kodwa ndicinga nayiphi wingwoman ezixabisa ityuwa yakhe uyazi kukho zillion ngaphezulu. Ngendlela Ndicinga nayiphi wingwoman uyazi ukuba sisoloko ukufunda emsebenzini – kwaye nokuba sele ihlawulwe!
Umhlobo wakho uza kudibana abantu abathile eyoyikekayo endleleni. Ngelishwa oko ubomi. Kodwa xa unako ukwenza nantoni na ukuba kuya kufuneka ukuba kubekho liqhekeza kaBhen & emva uJerry kwaye ube nje apho kubo. Qinisekisa ukuba bayazi ukuba benza nto imbi nokuba baza kudibana umntu owayekufanelekela kakuhle kubo kwixesha elizayo. Kucacile ukuba bathe kakhulu izinto ngenkohlakalo kokuqhekeka-up ungafuna kuya kufuneka aye kwezinye zezi iinkcukacha okanye nje ukuphulaphula. Ngenxa yezinto benzakele, kuya kufuneka ukuba ufumane ukuba aphume kwinkqubo yabo. Yho ngokuqinisekileyo kuba embi malunga ex!
Ndikhumbula xa usiva iqela labahlobo ukuthetha nokuva ntombazana ithetha ukuya ekhaya kunye mfo ukuba kancinci ngokunkwantyiswa ebusuku phambi. Okuvuyisayo yena kusini kodwa kunzima kancinane ukufumana ukuphuma endlwini yakhe ngosuku olulandelayo. endayithethayo ngephanyazo ibe kwakutheni ukuze namnye kubo ahambe naye ukuba yena bit ngokunkwantyiswa ukuba ababefanele ukuba abahlobo bakhe? Ndiba ube bit nzima kuba kunzima ukuba wena endlwini ukugonwa ngayo xa ungafumenanga kwabamenyiweyo kodwa ndicinga ngokobuqu ukuba ndicinge iqabane lam wayegoduka kunye enyakanyakeni ndingathanda zama sam sinzima nokuba bacinga ndandinengcwangu ukungena kwaye kulala esofeni! Xa kungenjalo ndingathanda qiniseka ukuba ifowuni kubo ukubona ukuba basaphila kusini. Ngokucacileyo ukoyika kukuba ucinga uya kubonakala phezu-zokhuselo kodwa ndicinga ekuhambeni kwexesha umhlobo uya kuyazi into oyenzayo ukuze ukhuseleko. Kwaye lilunge ngakumbi ezizezinye okuza kwenzeka ukuba umhlobo wakho noko ngelishwa ke udla.
Ukuba Essentials On Stand-Ngo
Yiloo bit enzima kwenziwe inxalenye yangaphambili. Ngoku kwi nwa! Nayiphi wingwoman uyazi ukuba kufuneka unikezelo lwakho make-up, iibhrashi iinwele, yobusi, etc … kwi stand-ngokuthi. Ngaloo ndlela, ukuba omnye wenu ubona umntu ungathanda unako zombini isabelo kunye nezinye izinto omnye nokuba u libele ukuze khangela indawo saka kwaye ukuzithandisa ukuba nomntu.
Mna andikanyuki, esithi ufuna ukuba Oscar-bafanelwe okanye nantoni na efana. Andikwazi into ukuze amaqhosha kodwa ekuhambeni kwexesha uya ufunde ukwenza phandle ukuba unomdla xa asinguwe ingakumbi. Into ngabantu xa uthanda umntu (Kwaye akukho namnye kuthi diss mntu ngoba thina sonke bekukho!) kukuba athethe ngazo kangaka. Kwaye wena uza kuba nenqala nomdla yonke bathi lonke ixesha kodwa inxalenye abaninzi kufuneka ndincume interject ngamazwi njengani kanye “ngenene?”, “Oh kuhle.”, “yeah, uthando ukuze” kwaye kufuneka uzakulunga. Babe nomdla kangaka ukuthetha mntu abayi nokungayiqapheli.
Ukuba usebenza okanye nantoni na ngexesha leyo eyahlukileyo. Kodwa ukuba yinto efunwa usenza abathembele usoloko ubeke umhlobo wakho kuqala ukuba ukuba umba enkulu ukuba kufuneka ndithethe kuni. Ukuba uyenza rhoqo kwaye awungeke into eyenziweyo okanye abayi kwenza okufanayo nani lokubuyiswa kufuneka kucingwe ukuba kodwa ukuba kubekho nobuhlobo obuhle kubo, khangela phandle kubo kwaye awukwazi ngokwenene na ngaphezu koko njengoko wingwoman olungileyo okanye umhlobo.